Jiri WordPress 'Internal Site Search ikike jiri Jetpack's Advanced Search | Martech Zone
Ndị na-azụ ahịa na ihe nchọgharị azụmahịa na-anọgide na-agbanwe dịka ha si ijere onwe gị ozi ma chọọ ozi ha chọrọ n’ejighi ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ gị. Ọ bụ ezie na ụtụ isi, achịcha, ọdịnaya metụtara ya, na imewe bụ ihe dị mkpa na njirimara ndị na-enyere ndị ọbịa aka, nchọta saịtị dị n'ime a na-elegharakarị ya anya.
Nchọgharị saịtị WordPress
Ọ bụ ezie na WordPress nwere ọrụ nchọta n'ime ya kemgbe ọ malitere, ọ dabere na ikike onye editọ iji bulie aha, edemede, mkpado, na ọdịnaya.
Nke ahụ nwere ike iwebata ahụmịhe metụtara, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ n’ịchọpụta maka nchọta n’ime na ị nwere ike tufue itinye aka na ọdịnaya gị. Kwalite maka ndị na - agụ akwụkwọ ma ị nwere ike tufuo izi ezi site na nchọta ime nke WordPress. Ma ọ bụrụ na ị na-eji Woocommerce, nke ahụ pụtara na ị na-efufu ahịa.
Ndị mmadụ nọ na saịtị eCommerce bụ 2x kwesiri karie ịzụta ihe mgbe ha na-achọ
Lọ ọrụ nne na nna nke WordPress na-aga n'ihu na-enye ọrụ akwụ ụgwọ na mgbakwunye, yana otu n'ime plugins ndị kachasị ewu ewu Jetpack. Jetpack bụ ngwa mgbakwunye dị egwu enwere ike iji mee ka saịtị gị dị mma, mee ka ọsọ saịtị gị dịkwuo elu, bulie ikike saịtị gị, ma jiri ngwungwu nchịkọta siri ike kọọ maka ya.
Ma eleghị anya, otu n'ime ihe ndị kasị akpali akpali bụ Nnyocha JetpackỌmarịcha nkwalite na ike nchọta nke WordPress nke na-enye ndị ọrụ ike ibute ụzọ, nzacha, na nyocha categorization nke posts, ibe, ngwaahịa na ụdị post ọ bụla ọzọ. Atụmatụ gụnyere:
Nsonaazụ dị oke mkpa na algorithms ogo oge a
Ewelitere ma wepụta nsonaazụ dabere na stats saịtị gị
Nchọgharị ozugbo na nzacha na-enweghị ịmegharị peeji ahụ
Nyocha a na-enyocha na nke a na-eche ihu (site na mkpado, edemede, ụbọchị, ụtụ isi obodo, na ụdị post)
Mmekọrịta isiokwu emelitere maka desktọọpụ na mobile
Ndenye oge ederede, ya mere ndekota ọchụchọ gị ga-emelite n'ime nkeji nkeji nke mgbanwe na saịtị gị
Nkwado maka asụsụ niile, yana nyocha asụsụ dị elu maka asụsụ 29
Egosiputara okwu ọchụchọ na ihe na post ọdịnaya
Ndozi ngwa ngwa na nke ziri ezi
Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike nweta azịza ha chọrọ ngwa ngwa n’enweghi ike kpaliri m, ọ bụ ọla edo dị ọcha ma mee ka ọrụ m dị mfe. Ana m akpọsa ya na nyocha ndị ahịa m ma na-agwa ndị mmadụ ka ha jiri ya n'ihi na ọ na-arụ ọrụ.
Kylie Mawdsley, Onye ndụmọdụ gbasara ime ụlọ, Kylie M. Ime ime
Martech Zone Nnyocha saịtị
Emelitere m nyocha saịtị anyị na Martech Zone ịgụnye Nnyocha Jetpack yabụ ị ga - ahụ n’onwe gị etu ọrụ onye ọrụ si dị mma karịa. Ndị ọrụ nwere ike imebi ihe kachasị na nsonaazụ site na mkpa ma ọ bụ afọ nke post. Ma obu, ha nwere ike inyocha nsonaazụ dabere na edemede, mkpado, ma ọ bụ afọ e bipụtara ya.
Ndị nchịkwa nwere ike ịhazi mmekọrịta ọchụchọ na imewe yana ọtụtụ nhọrọ:
Isetịpụ ndabara ụdị iji site mkpa, Kacha ọhụrụ, ma ọ bụ kasị ochie ihe.
Na-enyere isiokwu ma ọ bụ ọchịchịrị aka.
Imeghe ihe ntinye abanye mgbe onye ọrụ malitere pịnye ma ọ bụ mgbe ha pịrị nyocha.
Ikike iwepu posts, ibe, ụdị post post, ma ọ bụ mgbasa ozi.
Ike ịhọrọ site n'ụdị dị iche iche.
Ike ịgbanwe opacity ndabere na machie.
Ike ịgbanwe agba dị egwu nke okwu ọchụchọ achọpụtara na nsonaazụ ọchụchọ.
Nnyocha Jetpack bụ nkwalite akwụ ụgwọ enwere ike kwụọ ọnụ iche ma ọ bụ jikọta ya na ngwugwu Jetpack gị.
Nweta nkwalite na Jetpack Search
Ngọnarị: Anyị bụ ndị mmekọ Nnyocha Jetpack.
Tags: Jetpackjetpack ngwa mgbakwunyenyocha saịtịWordPresswordpress pluginWordPress pluginswordpress saịtị search